गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क कत्तिको उचित , कति जोखिम, कति आनन्द ?गर्भावस्थाका बेला यौन सम्पर्क गर्दा ख्याल राख्नैपर्ने कुराहरु – Etajakhabar
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क कत्तिको उचित , कति जोखिम, कति आनन्द ?गर्भावस्थाका बेला यौन सम्पर्क गर्दा ख्याल राख्नैपर्ने कुराहरु
महिलाको पेटमा गर्भ बसेपछि गर्भको संकेतको रुपमा शुरूको अवस्थामा वाक्वाकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, रिँगटा लाग्ने, तल्लो पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । गर्भावस्था महिलाका लागि संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा तनाव लिने, ठाउँ परिवर्तन गर्ने, गरूङ्गो भारी उठाउने र बढी यौन सम्पर्क गर्नाले पनि तल्लो पेट दुख्ने र रक्तश्राव हुने लक्षण देखा पर्छन् ।
कसै कसैलाई सामान्य अवस्थामा पनि रक्तश्राव हुनसक्छ । यस्ता लक्षण गर्भमा रहेको भ्रुणको विकास हुन नसक्दा पनि देखिने संभावना हुन्छ । पहिलो तीन महिनासम्म यस्तो वाकवाकी लाग्ने समस्या लगातारजस्तै हुनसक्छ । तीन महिनापछि यो समस्या आफैं बन्द भएर जान्छ । गर्भावस्थामा शरीरमा रहेका हर्मनमा परिवर्तन आउने हुनाले यस्ता लक्षण देखिने हो । यस्तो अवस्थामा गर्भ तुहिने खतरा पनि हुन्छ ।
गर्भवतीको सुजर गरिएको छ भने सामान्य समस्या ठीक भएर जान्छ । तर गर्भको ३८ हप्तापछि सुजर काट्नु पर्छ किनभने ३८ हप्तापछि जुनसुकै समयमा पनि गर्भवती सुत्केरी हुन सक्छिन् । यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिलालाई नियमित जाँच गराउनु पर्छ । गर्भावस्थामा महिलालाई रक्तअल्पता हुने सम्भावना बढी हने हँुदा आइरन चक्की, फोलिक एसिड र बी कम्प्लेक्स खानुपर्ने हुन्छ । खानामा आइरन तत्व भएका खाना खाने, त्यसैगरी फलफूल खाने, हरियो सागपात, गेडागुडी, प्रोटिनयुक्त खाना र माछामासु खाने गर्नुपर्छ ।
गर्भावस्थामा उच्च रक्तचाप पनि हुनसक्छ । उच्च रक्तचापमा गर्भवतीको स्वास्थ्यमा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उच्च रक्तचाप भयो भने आमा र बच्चा दुवैलाई खतरा हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा उच्च रक्तचाप कम गर्ने औषधि सेवन गरी आराम गर्नुपर्छ । अन्यथा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान पनि जान सक्छ । कुनै कुनै गर्भवतीलाई ३४ हप्ता अगाडि नै रक्तश्राव हुनसक्छ । साल पाठेघरको मुखमा आएर बस्यो भने यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यो समयमा आपतकालीन शल्याक्रियासमेत आवश्यक पर्नसक्छ ।
१८ वर्षभन्दा कम र ३५ वर्ष भन्दा बढी उमेर छ भने पनि यस्ता समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् । गर्भवतीको उमेर कम वा बढी भएमा खतरा बढी हुने भएकोले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ।महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको आफैं ख्याल राख्नुपर्छ । गह्रौ वस्तु नउठाउने र सामान्य काम गरे पनि शरीरलाई असर पार्ने गरी अप्ठेरो काम गर्नु हुँदैन । खाना आइरन, प्रोटिनयुक्त र सन्तुलित हुनुपर्छ ।पानीकै कारण, जन्डिस, पखालाजस्ता समस्यासमेत देखिने संभावना भएकोले पानी उमालेको मात्रै पिउँनुपर्छ । गर्भावस्थामा जन्डिस भएमा धेरै खतरा हुन्छ । गर्भावस्थाको जन्डिसले बच्चालाई खासै असर नगरेपनि आमालाई खतरा हुन्छ । हेपाटाइटिस बी भएमा त रक्तश्रावका कारण आमाको मृत्यु नै हुनसक्छ ।
गर्भावस्थामा गर्भवती महिलालाई चाहिने प्रमुख कुरा पारिवारिक सहयोग हो । यस्तो वातावरणले गर्भवतीलाई मानसिक सन्तुष्टि मिल्छ । पारिवारिक सहयोग भएन भने गर्भवतीमा मानसिक चिन्ता हुने र खान मन नलाग्ने हुँदा रक्तअल्पता हुनसक्छ । त्यसैले श्रीमान्लगायत परिवारका सदस्यको हेरचाह र सद्भावले गर्भवतीलाई ठूलो मद्दत मिल्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।गर्भावस्था हेमोग्लोविन, सुगर, युरिन, हेपाटाइटीस, एचआईभी, रक्त समूह सबै जाँच गर्नुपर्छ । यदि आमालाई एचआईभी पोजेटिभ छ भने बच्चालाई नेगेटिभ कसरी गर्ने भन्ने बिषय निकै गम्भीर समस्या हो ।
यस्तो अवस्थामा शल्यक्रियामार्फत् बच्चा जन्माउनु भन्दा सामान्य रूपमै बच्चा जन्माउनु पर्छ । महिलामा थाइरोइडको समस्या छ,छैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ । यदि थाइरोइड छ भने गर्भ खेर जाने संभावना हुन्छ । नियमित रुपमा गर्भ जाँच जरूरी कुरा हो । २८ हप्तासम्म एक एक महिना, २८ हप्तापछि दुई÷दुई हप्ता र ३६ हप्तापछि एक÷एक हप्तामा जाँच गराउनु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २७, २०७५ समय: २०:३४:२१
बेकिङ सोडा र एप्पल भिनेगरको यसरी गर्नुहोस् प्रयोग हट्नेछ , ब्ल्याकहेड्स वाइटहेड्स
के हो बर्ड फ्लु ? कसरी सर्छ यो ? कसरी बच्ने ? जान्नुहोस् रोकथामका उपायहरु
यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ अल्सर, कसरी जोगिने ? एकपटक हेर्नुहोस पछुताउनु पर्दैन
याद राख्नुहोस यसकारण यी ५ मसला सोच-विचार नगरी खान हुदैन जान्नुहोस्
के तपाई अण्डा खानुहुन्छ ? अण्डा खादा हुने यस्ता १० फाइदाको बारे जान्नुहोस्
अनुहारमा चमक ल्याउन चाहानुहुन्छ ? सुत्नुअघि अनुहारमा यी ९ चीज लगाउनुहोस् , जसका यस्ता छन् फाइदा